Vladimir Mayakovski. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. Ekele | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Vladimir Mayakovski bụ otu n'ime ndị na-ede akwụkwọ pụrụ iche, esemokwu, nke ọhụụ na nke pụrụ iche nke abụ uri Russia nke narị afọ 1893. Amuru ya na ubochi dika taa na obodo Georgia nke Baghdadi na XNUMX. Nke a bu nhoputa ufodu ufodu nkpuru edemede ya iji choputa ma obu cheta ya.
2 Nhọrọ nke poems
2.1 Dika nwatakiri
2.2 N'afọ iri na ụma
2.3 Ọ na-adịkarị ka nke a
2.4 Verlaine na Cezánne
Mgbe nna ya nwụrụ na mmalite narị afọ nke XNUMX, Mayakovski kpaliri ezinụlọ ya Moscow, ebe o hapuru omumu ya itinye onwe ya na ndoro-ndoro ochichi.
Na mgbakwunye na ede abu, ọ dịkwa ukwuu onye na-ese ihe nkiri na onye na-eme ihe nkiri sinima. Ọ na-achakwa ka odee na n'ime ederede ya ọ na-ekwupụta ma na-agbachitere ezigbo mgbanwe ya. Akwa ima, na kwa ekwe omume, nke ndụ ya, bụ Lili brik, onye ọ raara nye ọrụ ya kachasị ama. Ọ gara France na United States, nke metụtara nnukwu abụ uri ya. Ma onye mmetụta nke mmeri na agbahapụ, gburu onwe ya na 1930.
Nhọrọ nke poems
Enwere m amara n'ịhụnanya, na-enweghị oke.
Ma dika nwatakiri,
ndị mmadụ na-echegbu, na-arụ ọrụ.
gbaba na ndagwurugwu nke osimiri Rion,
na awagharị na-eme ihe ọ bụla.
Nne m were iwe:
Nna m yiri m belt.
Ewetara m ruble atọ
wee soro ndị agha na-egwuri egwu n'okpuru mgbidi.
Na-enweghị ibu uwe elu,
na-enweghị ibu ibu nke booties,
m gbara ọkụ n’okpuru anyanwụ Kutaís,
Rue mb theye ha kpuchiri obim.
Anyanwu juru ya anya:
«You pụghị ịhụ
o nwekwara obi
nwata nwoke ahụ na-ekwusi ike.
Kedu ka o si dabaa na mpempe a
ụzọ ụgbọ oloko,
na kilomita kilomita? »
Ndị ntorobịa ahụ nwere ọrụ puku.
Anyị na-amụ ụtọ asụsụ ruo mgbe o juru anyị anya.
ha chụpụrụ m n'afọ nke ise
m wee gaa nla rie ụlọ mkpọrọ ndị dị na Moscow.
N’obere ụlọ anyị
ndị na-ede ntutu nwere ntutu na-apụta maka akwa.
Kedu ihe egwu anemic a maara?
Ya mere m
ha kụziiri m ịhụ n'anya n'ụlọ mkpọrọ.
Kedu ihe ọ bara uru ma e jiri ya tụnyere nke a
mwute nke oke ohia nke Boulogne?
rie nkpu nke-uku n'iru ala?
Enwere m ịhụnanya na windo igwefoto 103,
site na "onye na-elekọta ụlọ ọrụ."
O nwere ndị na-ele anyanwụ anya kwa ụbọchị
ma dịkwa mpako.
"Igwe ha abaghị uru," ka ha na-ekwu.
maka obere odo sunbeam,
gosipụtara na mgbidi m,
A gaara m enye ihe niile n ’ụwa.
Ọ na-adịkarị ka nke a
A na-enye onye ọ bụla ịhụnanya
ego na na,
ọ na-eme ka ahịhịa dị n’ime ala sie ike.
N'ime obi anyị na-ebu ahụ,
na uwe elu ahụ,
ma nke a dị ntakịrị.
Naanị onye nzuzu,
na igbe obi na-ekpuchi ya stachi.
Mgbe ha mere agadi, ha na-akwa mmakwaara.
Nwanyị na-etinye ihe ntecha.
Nwoke ahụ na-eji usoro Müller eme ihe,
ma ọ bụ akaha
Akpụkpọ ahụ na-aba ụba wrinkle ya.
Blohụnanya na-ama ifuru
mgbe ahụkwa, ọ na-ehichapụ akwụkwọ ya.
Verlaine na Cezánne
Ana m ada, oge ọ bụla,
na nsọtụ tebụl ma ọ bụ shelf,
Jiri m nzọ ụkwụ na-atụ ya kwa ụbọchị,
mita anọ nke ụlọ m.
Ihe a niile banyere ụlọ nkwari akụ Istria dị warara maka m,
na akuku a, Campagne-Premiere n'okporo ámá.
Ndụ Paris na-emegbu m.
Nke ịba ụfụ, site na ndị ahịa,
ọ bụghị nke anyị.
N'aka nri, enwere m Boulevard Montparnesse,
n'aka ekpe, Boulevard Raspall.
M na-eje ije ma na-ejegharị n'enweghị mkpịsị ụkwụ,
M na-eje ije ehihie na abalị
dị ka ọkọlọtọ ọkọlọtọ,
Ruo mgbe anya m hụrụ,
ghosts na-ebili. (…)
Mpempe akwụkwọ mmiri n'okpuru afọ.
Na-ebute ebili mmiri site na ezé ọcha.
Ọ bụ akwa arịrị nke ekwú-dị ka a ga - asị na ha na - aga ije
ịhụnanya na agụụ maka ekwú ọla kọpa.
Gbọ mmiri ahụ rutere n'ọnụ ụzọ nke ihe ndina ahụ
mu anụ iya ẹnya iya.
Na ntị nke ụgbọ mmiri ndị ntị chiri
arịlịka ahụ na-agba ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Abụọ » Vladimir Mayakovski. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. Eke